5 Inobudirira Neshanduko Shanduko Kugadziridza Matipi Anokunda Iwe Vatengi | Martech Zone
Heano akakodzera tidbit yeruzivo: 52 muzana wepasi rose webhu traffic inotora kubva kune mafoni. Huwandu hwevanhu vari kushandisa nharembozha huri kukwirisa. Ndipo panowanikwa vanhu vazhinji zvigadzirwa zvako kana masevhisi.
Hapana mubvunzo nezvazvo.
Asi pasina intuitive uye yakanyatsogadzirirwa mobile web mhinduro kune rako bhizinesi, zvakaoma kukwikwidzana nevamwe. Mune e-commerce bhizinesi, semuenzaniso, zvakawanikwa kuti 55 muzana yevatengi vakaita kutenga kwavo pavakawana chigadzirwa kuburikidza nenharembozha yavo.
Usasiyiwa kunze! Heano mashanu anoshanda mafoni ekugadzirisa matipi ekuwedzera yako shanduko mwero.
1. Nhare mbozha Saiti Yekumhanyisa Kumhanyisa Ndiyo Yako Yekutanga Kukoshesa
Kumhanya kune basa kana zvasvika kune nhare mbozha.
Saizvozvo, kutsvakurudza kunoratidza kuti mawebhusaiti enhare anotakura masekondi mashanu kana nekukurumidza anogona kuburitsa kutengesa kwepamusoro pane ayo anononoka. Indaneti vemo havashiviriri inononoka kurodha kumhanya. Inoonekwa sechituko kune yako webhusaiti webhusaiti.
Neraki, iwe unogona kuita nzira dzakawanda dzekugadzirisa dambudziko iri.
Deredza zvinowedzerwa pane yako nhare. Huwandu hwezvikumbiro zve server pane webhusaiti yako hunogona kukanganisa zvakanyanya kumhanya kwayo. Uri kushandisa akawanda trackers kana analytic maturusi? Tarisa uone zvemukati zve software yako; pamwe unogona kuwana dambudziko ipapo.
Usambofa wakakanganwa nezve kumusoro kusvika pasi kuongorora. Pamwe mamwe mafaera ari kukuvadza musystem yako. Mafaera mahombe senge zvirimo zvinoonekwa zvinogona kudzora mutoro wako nekukurumidza. Saka, iwe ungangoda kudzikisa mafaera ako pawebhusaiti yako. Mifananidzo, ad-tech, uye nhamba yefonti ndizvo zvakajairwa mhosva mune izvi.
Dzidza pamusoro gutsikana izvo zvinoda kuiswa pekutanga. Vaise pamusoro peji rako, iro rinofanira kutanga kurongedza pamberi pechimwe chinhu chiri muwebhusaiti. Iri zano rinogona kuwedzera mutoro wako nekumhanya uchifunga nezve mushandisi chiitiko UX chesaiti.
2. Sarudza Inopindura Dhizaini kuti uve Nhare Yakagadzirira
Kugadzirisa mafoni dhizaini kunogadzira. Iwe unotofanira kuchinjira kune akasiyana masikirini eescreen. Asi kuda hakumire ipapo. Unofanirawo kufunga zvakasiyana nhare yekutaura uye chikuva.
Iwe unogona kutarisa pamabhatani kuti zvive nyore kufamba. Iwo mamenyu kana zvikamu zvinofanirwa kuve nyore kudzvanya. Peji rega rega rinofanira kupa mushandisi mazano akajeka ekuenda kana vachida kuita chimwe chinhu sekuwedzera icho chinhu kungoro, kudzima zvikumbiro, kana kutarisa odha.
Kurongeka kwemagadzirirwo kunofanirwa kuve kuchinjika. Inofanirwa kugadzirisa zvigadziriso zvinyorwa zvemifananidzo, mifananidzo, uye saizi yemavhidhiyo. Ingo rangarira, mhinduro dzemafoni dzinofanirwa kuiswa pamberi. Mapeji asingagumi, zvinyorwa zvakakura, uye zvakapamhamha zvinoonekwa zvirimo zvadzokerwa zvachose kune vashanyi vako.
3. Bvisa zvisina kukodzera Pop-ups uye Mavhidhiyo eVashandisi veMafoni
Idzo pesky pop-ups uye vhidhiyo kushambadza zvinogona kukanganisa yako yakazara webhu dhizaini, uyezve, yako yekutendeuka mwero zvakare.
Hazvina mhosva kuti yakanaka sei nharembozha yako dhizaini, kushandisa akawanda pop-ups kunoderedza zvakanyanya UX uye kugutsikana kwevatengi, izvo zvinotungamira kune yakaderera kutendeuka chiyero.
Panzvimbo pekugadzira yakawanda kutungamira, iwe unozowana yakakwira bounce mwero uye yakadzikira traffic. Muchokwadi, maererano neongororo yakaitwa ne Mubatanidzwa weZviri nani Ads, mamwe emhando dzeruvengo rwekushambadzira nharembozha anotevera:
Mifananidzo iyo inoramba ichipenya
Ads iine kuverengera usati wadzinga
Nhare mbozha mapeji ane makuru kupfuura makumi matatu muzana ezishambadziro
4. Ita Kuti Zvive Nyore Kupfuura Seamless Checkout
Checkout kusiiwa hakuna kujairika. Icho chikonzero chiri mune yakasarudzika dhizaini ye Checkout peji. Pane zvakawanda zvezvikonzero nei vatengi vachisiya zvigadzirwa pane yekutenga ngoro vasina kunyatsozvitenga. Kazhinji, ivo havakwanise kuwana bhatani chairo rekutsikirira, kana peji racho rakanyanya kuomarara kufamba.
Naizvozvo, iyo peji rekutarisa rinofanira kuchengetwa rakachena uye zvishoma. Nzvimbo chena uye nekuparadzira matanho pamapeji akawanda kuchabatsira. Iwo mabhatani anofanirwa kusevenzesa mutengi kune chaiyo kodhi yeiyo Checkout maitiro.
5. Wedzera Dzimwe Mafomu Ekubhadhara
Chikamu chekutarisa ndiyo poindi yaunogona kushandura vashanyi kuva vatengi chaivo. Naizvozvo, inofanirwa kuve yakagadziridzwa kune inotapira kutengeserana uye yakakwirira kutendeuka.
Usatarisira kuti vatengi vako vese vachashandisa PayPal kubhadhara maodha avo.
Iyo e-commerce bhizinesi inofanirwa kugara ichifunga kushanduka. Zvimwe kunze kwemakadhi echikwereti kana kubhadhara kubhangi, ungangoda kuwedzera Apple Pay, uye Google inobhadhara kumakero ekubhadhara muwebhusaiti yako. Dhijitari chikwama chiri kubuda zvishoma nezvishoma, izvo e-commerce mabhizinesi anofanira kufanoona uye kutora mukana nazvo.
Sezvo mafoni efoni achienderera mberi kutonga nyika, mabhizinesi anofanirwa kudzidza kuchinjika.
Kune mikana yakawanda irimo muchitoro pane nharembozha. Zvese zvinotora kurongeka kwakanaka uye kugara uchigadzirisa. Chengetedza vatengi vako vafare kuburikidza neyako nharembozha webhu mhinduro nekuita zvese zvakanyatsorongeka.
Asi pane zvekare nzira iri nani yekuita zvinhu. Unogona kuwana rubatsiro kubva kune nyanzvi. Kugadziridza nhare kunogona kuve kwakaomarara, asi nerubatsiro rwewebhu dhizaini Derry unogona kuzviita zvese nefaera. Uyezve, unogona kuchengetedza nguva yekutarisa kune zvimwe zvikamu zvebhizinesi rako.
Tags: auto-kutamba vhidhiyomubatanidzwa wezviziviso zvirinanikuverenga kushambadziramobile kutendeukamobile optimizationnharembozhakukurumidza kumhanyanharembozha webhusaitimusoni Checkout